Ahoana ny fomba ahazoana ny vokatra voatanisa ao amin'ny Amazon - haingana sy miadana?
Amazon dia fantatra amin'ny hoe tsena malaza amin'ny aterineto malaza amin'ny zavatra manodidina ny 170 tapitrisa isan-kerinandro tsy manan-tsahala tombanana isam-bolana. Izany no antony raha mpividy vaovao ianao ary te hahafantatra ny fomba hahazoana ny vokatra voatanisa amin'ny Amazon - efa eo amin'ny toerana mety ianao. Eto ambany eto dia hampiseho anao dingana fohy amin'ny antsipirihany ianao mba hahatakaranao ny fomba hahalalanao haingana ny vokatra voatanisa ao amin'ny Amazon - ary manomboka mamokatra anao mivarotra vokatra mahomby avy hatrany. Noho izany, andeha isika handinika ny tena fototry ny dingana.
Ahoana no hizarana ny vokatrao Amosa
Alohan'ny zavatra hafa, avelao aho hampiseho aminao ny fomba hivarotana amin'ny Amazon. Ny zavatra dia ny hoe ny fizotran'ny fivarotana azy dia mety ho tsotra na ho sarotra - raha miankina amin'ny karazana vokatra, ny sokajy misy azy, na ny habetsaharanao hapetraka ho lasibatra ho an'ny baikonao any aoriana - cheap unmetered server. Saingy misy loha-hevitra efatra mba hahatonga ny zavatra ho mora kokoa aminareo, farafaharatsiny izay mifandray amin'ny famokarana ny vokatrao dia mitatitra haingana ny Amazon amin'ny fomba tsara:
1. Fidio ny sokajy mpividy azo antoka - matetika indrindra, miankina tanteraka amin'ny karazana orinasa sasantsasany ataonao. Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny manomboka mivarotra amin'ny fomba roa samihafa - na amin'ny maha-mpivarotra madinidinika anao (raha toa ka mahatratra 40 isam-bolana ny salam-pivarotana isam-bolana, ny saram-pivarotana mediocre vola dia handoa anao mihoatra ny 1. 5 dolara isam-bolana nividy tany), na manomboka amin'ny mpivarotra matihanina hatramin'ny voalohany (omena fa ny isam-bolana isam-bolana dia andrasana mihoatra ny 40 zavatra amidy isam-bolana, ny volanao isam-bolana dia manomboka amin'ny 40 bucks ary ny sasany amin'ny vola fandoavam-bola sasany).
2. Amboary ny kaonty mpanjifa Amazon anao - midika izany fa tokony hahazo ny varotra varotra misy anao any Amazona ianao vao manomboka mividy any. Mba hamenoana ity ampahany amin'ny fananganana kaonty ity, dia hangatahan'i Amazona ianao mba hameno ireto fampahalalana manaraka ireto: Business Name, Legal Name / Adiresy, Fandefasana entana, Banky kaonty momba ny kaonty, Contact Data (na Amazon ho an'ny tenany, ary ny mpanjifa ho avy).
3. Mamorona sy mameno ny mombamomba anao manokana momba ny varotra - izany hoe rehefa hamela ny olon-drehetra hividy any Amazonia ianao hahafantarana ny fivarotan-tseraseranao momba ny mpivarotra (mpizara momba ny varotra, ny anao manokana ny mpivarotra Amazon, fototra fepetra sy fepetra momba ny politikanao miverina / refund).
4. Ankehitriny fantatrao ny fomba hahazoana ny vokatra voatanisa ao amin'ny Amazon - fotoana hanombohana mivarotra sy fandefasana! Mazava ho azy fa ity ampahany fampiharana ity dia matetika no sarotra indrindra. Midika izany fa tsy maintsy ampitomboinao ny ezaka fanatsarana ny fikarohanao ary mba ianaro ny fomba hakana ny ankamaroan'ny lisitry ny vokatrao. Farany, mba hampivarotana azy ireo amin'ny ankapobeny.